"Hayyoonni Oromoo eenyummaafi seenaa Oromoo karaa gurmaa'een barreessuun dhalootatti dabarsuuf itti gaafatamummaa guddaa qabu" PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa - ETHIOPIANS TODAY
“Hayyoonni Oromoo eenyummaafi seenaa Oromoo karaa gurmaa’een barreessuun dhalootatti dabarsuuf itti gaafatamummaa guddaa qabu” PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa
“Hayyoonni Oromoo eenyummaafi seenaa Oromoo karaa gurmaa’een barreessuun dhalootatti dabarsuuf itti gaafatamummaa guddaa qabu” PMNO Obbo Shimallis Abdiisaa.
Pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hayyuu seenaa obbo Taaboor Waamiitiin kitaabaa mata duree “Eenyummaa Oromoofi Seenaasaa” jedhuun barreeffame keessummaa kabajaa tahuun eebbisaniiru.
Hayyoonni Oromoo eenyummaafi seenaa Oromoo karaa gurmaa’een walitti qabuufi barreessuun dhalootatti dabarsuufi warri kaanis akka beekuuf itti gaafatamummaa guddaa qabu jedhan.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa kitaaba har’a eebbifame kana kooppii kuma 25 birrii miliyoona kudhaniin bituun, manneen barnootaa Oromiyaatiif akka kennu himan.
Afrikaatti kan duraa kan tahe Manni Maxxansaa ammayaawaan tokko dhiyeenyatti eebbifame tajaajila ni kennas jedhaniiru.
Siyaasni Oromoo siyaasa mandaraa bira dabree Siyaasaa Biyyaafi Gaanfa Afrikaa taheera kan jedhan Pireezedaantii Shimallis, jijjirama kanammoo beekumsa,teeknoolojiifi diinagdeen utubuutu barbaachisa jedhan.
Seenaan Itiyoophiyaa seenaa Sabaafi sablamoota Itiyoophiyaa hundumaa waan taheef, eenyuummaafi seenaa sabaafi sablamoota hundaa cimsuufi beeksisuun akka barbaachisu Pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatan.
Hayyoonni Oromoo guddina eenyummaa Oromoofi seenaa Oromoorratti gumaacha fuulduratti taasisaniifi Jiddu Galli Qoranno Aadaa Oromoo akka cimuuf Mootummaan Naannoo
deeggarsa barbaachisu hundaan bira jirra jedhan.
Hayyuun Seenaa Obbo Taaboor Waamii Kitaaba qopheessanfis galateeffataniiru.
Maanguddoo Dogongoraan Waggaa 68 ture